Shiinaha warshad xaaqista korontada iyo soosaarayaasha | Cunitaanka
4-in-1 xaraashka korantada aan shaqeyneyn ee korantada leh oo leh laba laab oo wareegaya ayaa kuu keenaya waayo-aragnimo cusub oo ku saabsan xoqidda / xoqidda / nadiifinta dhulka. Xarig-la'aan, fudud oo lagu qaado batteriga Lithium 3200mAh oo dib loo soo celin karo, habab muddo dheer soconaya. Wax-soosaarka dusha sare ee wax-soo-saarka & baalasha leh: oo leh 300ml haanta weyn ee biyaha ama wakiilka wax. Qaylada hoose ee ka yar 30dB. Madaxa xashiishka Nano ee la dhaqaajin karo lana dhaqi karo .Wana fiicantahay in la nadiifiyo nabarro kala duwan. Iyada oo la iftiiminayo LED-ka si looga caawiyo iftiinka meelaha mugdiga ah markii loo baahdo.
Waqtiga shaqada > 60min (Mopping qallalan); > 40m (Mopping qoyan)
Awoodda Batariga Batari 3200mAh Lithium
Taangiga biyaha 300mL
Waqtiga lacag bixinta 2.5 Saacadood
Miisaanka saafiga ah 2.7KG
Awoodda Haanta Biyaha 300ml
Cabbirka badeecada 124 * 34 * 20cm
Heerka Sawaxanka 30-50 dBA
1. 4-in 1 isku duubni badan
Xaraashka korantada ee laba-laaban ee mashiinka xiira, baalasha waxsoosaarka waxsoosaarka, xoqe qoyan iyo qalalan, iyo nadiifin
Waxaad heshay boodhadh waxsameeyaha wax ka sameysan / wax ka sameysmaya sagxaddaada alwaax si aad u cusbooneysiiso markasta oo aad rabto.
2. Way fududahay in la nadiifiyo noocyada kala duwan ee sababaha iyo xaaladaha kala duwan
Wax ka qabato noocyo badan oo dabaq ah sida dabaqa alwaax, dhoobada, marmar, dusha lebenka, laminates, iwm.
qoyan / qalalan / xoqidda xoqidda, hal qalab oo leh 4 shaqooyin nadaafadeed: boodh, wasakhda saliidda, wasakhda caanaha, qashin dhooban.
3. Xereen hal-saxaafadeed
Si dhakhso leh u qalaji oo aan lahayn biyo wasakhaysan, ayaa si dhakhso leh u qallajin doonta sagxaddaada isla markaana ka tagi doonin wasakhda biyaha. Thanks to suufka wareegaya ee dhaqsaha badan. Hal hawl oo gacanta ah, oo aan foorarsi lahayn, waqti iyo tamar keydin.
4. Qaylada hooseysa
Sawaxanka hoose wuxuu gaaraa oo keliya 30-50 dB, ku dhowaad ma jiro wax qalliin oo ha ku dhibin qoyskaaga si ay u helaan nasasho wanaagsan.
5. Lacag qaadasho la qaadan karo iyo muddo dheer
Awooddu waxay socon kartaa 60 daqiiqo. Way nadiifin kartaa oo xaaqi kartaa meelo kala duwan, dabooli kartaa baahiyaha 200m2 nadiifinta gudaha. Batariga jarista waxtarka sare 3200mmAh Lithium batari, Waxay nadiifisaa 200sqm 60 min hal qarash. Xidhmada batteriga furi kara, fududahay in la beddelo oo la dalaco.
6. Laba suufka wareega oo leh matoorro awood badan
Ka caawi qalabkaaga inuu si qoto dheer u dhaqaaqo qashinka, jirka weyn ee culus leh suufka wareegaya miisaanka saafiga ah waa 2.7KG kaas oo damaanad qaadaya awooda nadiifinta
7. Iftiinka LED-ka
Waxay kaa caawineysaa inaad ogaato meelaha mugdiga ah ee la gaari karo: fadhiga, miisaska, miisaska, sariiraha
8. U nadiifi meelaha sidaad rabto
Xaaq geesaha iyo meelaha hoose si raaxo leh, jiif 180°, taagan 90°.
Hore: Nadiifiyaha Xiinka Daawada
Xiga: Nadiifiyaha sagxadda xarigga
Xakamaynta Wareegga Korantada ee Xadhkaha goostay
Xaaqista Korantada Wireless
Xakamaynta Korontada Rotary Electric